Lacag la magacaabay - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Guriga Minnetonka Foundation
Mu'asasada Hada Loogu Magacdaray Lacag
Abaalmarinta Guddiga Brad ee Heerka Sare ee Waxbarashada Dugsiga Hoose
Waxaa loogu magac daray maamulihii hore ee Deephaven iyo Minnewashta Bradley G. Board, abaalmarintan lacageed ee la siiyo macallinka waxbarashada aasaasiga ah ee Minnetonka ama shaqaale xirfadlayaal ah ayaa la bixiyaa Maajo kasta.
Waxaa aasaasay Fasalka 1964 iyadoo lala kaashanayo isku imaatinkooda fasalka ee 2019, hal deeq waxbarasho ayaa la siin doonaa Maajo kasta oo loo dhiibo qof weyn oo ka tirsan Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Sanduuqan waxaa aasaasay 1997 qoyska Duff ka dib dhimashadii Nick Duff, iyada oo la tixgelinayo Nick shaqadiisa iyo sida qotada dheer ee ay uga go'antahay daraasadaha dhaqamada badan. Nick wuxuu ahaa macallin cilmiga bulshada ka dhiga Minnetonka intii u dhaxeysay 1947-1988 wuxuuna u adeegi jiray wakiilka Minnetonka Foundation 1990-1995. Sanduuqa waxaa markii hore laga aasaasay xusuus ilaa Nick Duff iyo hadiyad hantiyeed oo loogu talagalay doonista Mr. Duff. Sanduuqa ayaa hadda ka faa'iideysanaya tabarucaadka qoyskiisa iyo deeq-bixiyeyaasha daneynaya horumarinta daraasadaha dhaqamada kala duwan ee Minnetonka.
Wax dheeri ah baro oo ku deeqo halkan
Waxaa aasaasay 2018 Betty Shaw si ay u aqoonsato qof waayeel ah oo soo bandhigay khibrado adeeg bulsho oo ku dayasho mudan iyada oo loo marayo Girl Scouts. Hal deeq waxbarasho ayaa la siin karaa Maajo kasta oo loo yaqaan 'MHS' oo sare sanadkiiba oo si weyn uga qayb qaatay Gabdhaha Scouts.
Gabdhaha ku guuleysta deeqda waxbarasho ee Scouts
2019- Faith Robinson iyo Megan Watras
2018- Amanda Tahnk-Johnson
Sanduuqa Daraasaadka Caalamiga
Waxaa aasaasey deeq bixiye aan la aqoon, sanduuqan deeq-lacageed wuxuu yareynayaa kharashka safarka ee ardayda dhigata Barnaamijka Daraasaadka Caalamiga (ISP) ee Dugsiga Sare ee Minnetonka iyadoo la muujiyey baahi dhaqaale. Codsiyada waxaa ansixiya macalimiinta daraasaadka caalamiga ah waxaana la siiyaa laba jeer sanad dugsiyeed kasta, ka hor safarada ISP ee dibada.
Deeqda-qorista xagaaga ee Lovett
Dr. Michael Lovett, Kaaliyihii hore ee Kormeeraha Guud ee Shaqaalaha, wuxuu door muhiim ah ka qaatay qorshaynta iyo aasaasida Xarunta Qoraalka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Deeqdani waxay ka caawisaa ardayda inay raacaan fursadaha qorista shaqsiyeed xagaaga.
Ururka Qalinjabiyeyaasha Minnetonka (MAA) Sanduuqa Dhaqanka Farshaxanka Fiican
Minnetonka Alumni Associatio n waxay maalgelisaa fursado aan caadi ahayn oo loogu talagalay macallimiinta iyo ardayda Minnetonka ee muuqaalka, bandhigga iyo farshaxanka suugaanta. Waxaa lagu hirgeliyaa hannaanka deeqda macallimiinta sanadlaha ah, lacagaha waxaa la bixiyaa Abriil kasta.
Waxaa aasaasay WD Radichel Foundation, sanduuqan wuxuu kafaala qaadayaa imtixaanka iyo falanqaynta ardayda 5 Navigator fasalka (ardayda sida gaarka ah u hibada leh IQs-ka 140 iyo wixii ka sareeya) si ay u bixiyaan faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan bartaha hibada sare leh. Hadafku waa in la sii wado buuxinta baahiyaha ardaydaas heerka sare markay u gudbayaan dugsiga dhexe.
Sanduuqa Charlie Parnell Memorial
Waxaa loogu magac daray Charlie Parnell, waalid Minnetonka iyo mutadawiciin ku dhintay da'da aan waqtigeeda la gaarin ee 40. Qoyska Charlie waxay aasaaseen sanduuqan xusuusta ah si loogu sharfo macallinka degmada ama qof shaqaale ah oo taabanaya nolosha ardayga baahida gaarka ah qaba si togan. Abaalmarintan lacageed waxaa la bixiyaa Maajo kasta.
Sanduuqa deeqda waxbarasho ee Sundem waxaa loo aasaasay in lagu sharfo macallimiinta Minnetonka ee Gary Sundem, Gail Sundem Noller iyo Gwen Sundem Jansen. Gary Sundem waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah Ururka Minnetonka Qalinjabiyeyaasha Abaalmarinta Abaal-marinta Alumni ee 2015, taas oo keentay in la aasaaso sanduuqa deeqdan waxbarasho. Hal deeq waxbarasho ayaa la siin doonaa Maajo kasta mid ka mid ah ardayda dugsiga sare ee Minnetonka.
Ku guuleystayaasha deeqda waxbarasho ee Sundem
Sanduuqa deeqda waxbarasho ee VANTAGE
Sanduuqani wuxuu siiyaa deeq waxbarasho ardayda ku qoran barnaamijka VANTAGE ee Daraasaadka Xirfadeed ee Sare ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Deeqda waxbarasho taariikh ahaan waxay ahayd qalinjabinta waayeelka si ay uga caawiso kharashyada kuleejka ama dadaallada xagaaga ee ardayda.
Sanduuqa Awood siinta Dhalashada Dhallinyarada
Waxaa aasaasay kormeeraha howlgabka ah Dr. Donald Draayer, sanduuqan wuxuu taageeraa ama abuuraa fursado loogu adeegayo dhalinyarada, dhalashada iyo horumarinta hogaaminta. Waxaa lagu hirgeliyaa hannaanka deeqda macallimiinta sanadlaha ah, lacagaha waxaa la bixiyaa Abriil kasta.
Wax dheeri ah baro oo ku deeqo halkan .
Samaynta Sanduuq Magac leh oo Aasaaska la leh
Aasaasku waa wakiilka maaliyadeed ee dhowr lacagood oo la magacaabay. Sameynta sanduuq magac leh, oo la soo jeediyay maalgashi bilow ah oo ah $ 5,000 ama ka badan, waa dariiqa shaqsi ahaaneed ee saamaynta tooska ah ee joogtada ah ugu yeelan kara dugsiyada Minnetonka.
Fadlan la xiriir Holly Ashmore wixii macluumaad ah ee ku saabsan sida loo aasaaso sanduuq la magacaabay oo laga helo Aasaaska Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.
Aasaasku wuxuu hayaa 10% miisaaniyadda cusub ee la magacaabay si loogu daboolo maamulka iyo maaraynta sanduuqa. Ujeeddada sanduuqa la magacaabay iyo hannaanka sameynta deeqda ayaa u baahan oggolaanshaha guddiga aasaaska.
Aasaaska Minnetonka /